Taorian’ireo hetsika “Black Lives Matter”, lasa marika amantarana tsy fitoviana sy fanavakavahana ao Brezila ny fahafatesan’ny ankizy mainty hoditra iray 5 taona · Global Voices teny Malagasy
Nianjera avy amin'ny rihana fahasivy Miguel nasaina nandrasan'ny mpampiasa an-dreniny
Voadika ny 16 Jolay 2020 4:23 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, عربي, Italiano, English
Mpanao fihetsiketsehana mitazona takelaka iray mivaky hoe ‘”ary raha mba ny zanak'ilay mpampiasa? ” Ny rariny ho an'i Miguel. Sary: Mídia NINJA/CC BY-NC 2.0
Ny 2 Jona, nitondra ny zanany lahikely 5 taona niaraka taminy tany amin'ny toeram-piasàny i Mirtes de Souza, mpiasa an-trano ao aminà ankohonana iray mpanankarena ao Recife. Rehefa nakatona daholo ireo sekoly sy toerana fitaizana zazakely tao Recife hatramin'ny niantombohan'ny valanaretina COVID-19, tsy mba nanome azy andro tsy iasàna ireo mpampiasa an'i Mirtes.
Tamin'izay andro izay, nangataka tamin'ilay fotsy hoditra mampiasa azy i Mirtes mba hanopy maso an'i Miguel raha izy kosa voairaka hitondra ny alikan'ity mpampiasa azy hitsangantsangana. Rehefa tafaverina izy dia ny zanany lahikely mivalampatra amin'ny gorodona tao amin'ny efitra farany ambany, toa vokatry ny fiantontàna no fahitàna azy, no tazany. Mbola velona no nentina tany amin'ny hopitaly i Miguel, saingy tsy tàna ny ainy.
Taty aoriana dia hita tao anatin'ny lahatsary CCTV tonga teo an-tànan'ny polisy i Sari Côrte Real, mpampiasa an'i Mirtes, mametraka samirery an'i Miguel ao anaty fanakadrihana (ascenceur), ary manindry ny bokotra mandeha mankany amin'ny rihana farany ambony indrindra amin'ilay tranobe. Hita ao amin'ireo sary i Miguel mivoaka an'ilay fanakadrihana tany amin'ny rihana fahasivy izay toerana, araka ny tsoakevitr'ireo manampahefana taorian'io, niakarany taminà lavarangana iray misy milina mpandrindra rivotra saingy tsy misy fiarovana, ary dia nilatsaka.
Nosamborina i Côrte Real ary nenjehina ho namono olona tsy niniana natao, saingy noafahana rehefa nandoa onitra 20. 000 BRLl (manodidina ny 4.000 dolara amerikàna). Ambaran'ny polisy fa eo an-dalam-panadihadiana ny mety ho fisian'ny fanosehana an'i Miguel avy any amin'ny rihana fahasivy.
Tao Brezila, taorian'ireo hetsipanoherana ny nanjo George Floyd, niteraka fipariahana hatezerana teny anivon'ny media sôsialy, ilay tranga, niaraka tamin'ireo marobe nihevitra ny fahafatesan'i Miguel ho ohatra iray hafa amin'ny fanavakavahana zakain'ireo teratany mainty hoditra ao Brezila.
Raha ireo mpampahalàla vaovao nisoroka tsy hamoaka ny anarana sy sarin'i Sari (iza navoakan'ireo mpampiasa media sôsialy), i Mirtes kosa nanao antsafa ho an'ny TV Globo, izay niely be tokoa:
Raha izaho no nahavita izany, nameno ny pejy voalohan'ny gazety rehetra ny sariko, toy izay efa hitako im-betsaka amin'ny fahitalavitra. Ny anarako no atao soratra goavana be, ary mameno ny eny rehetra eny ny sarin-tavako. Saingy ny azy tsy hitan'ny mpampahalàla vaovao, tsy azo ampahafantarina ny vahoaka(…) Antenaiko fa ho azo ny rariny, satria raha nifamadika ny toerana, heveriko fa na ny zo handoa onitra aza tsy ho azoko akory. Aina iray no nafoy, noho ny tsy fanànana faharetana. Hamela zazakely samirery, anaty fanakadrihana, tsy azonao atao izany. Ankizy napetraka teo ambany fiadidiany.
Ny fanavakavahana ao Brezila
Vetivety dia lasa vaovaom-pirenena ny tantaran'i Miguel. Maro no mahita azy io ho toy ny marika hita mason'ny faharatsiana lalimpakan'i Brezila, indrindra fa ny fanavakavahana ara-drafitra ao aminy atao amin'ireo olompirenena mainty fihodirana.
Afrikàna niisa 5 tapitrisa no nentin'i Brezila an-kery hiasa toy ny andevo tao anatin'ny vanimpotoana izay naharitra 400 taona — mihoatra ny im-polo lavitra noho i Etazonia. Brezila ihany koa no firenena tratra farany indrindra any Amerika tsy mandrava ny fanandevozana (tamin'ny 1888).
Fa ny fahafatesan'i Miguel koa dia fampahatsiahivana momba ny tsy fitoviana sy ny kolikoly mandady ao Brezila, sy ny fomba nataon'ny valanaretina COVID-19 hampitomboana azy roa ireo.
Tsy nanana safidy hafa afa-tsy ny nanohy ny asany nandritra ny fisian'ilay valanaretina i Mirtes mba hamelomany ny ankohonany. Tsy izy irery anefa no toy izay : Tamin'ny Martsa, ny olona voalohany voalaza fa matin'ny COVID-19 tao Rio de Janeiro, dia vehivavy mpiasa an-trano izay tsy afaka ihany koa nanaja ny fihibohana noho ny nataon'ny mpampiasa azy.
Tao anaty antsafa iray, nambaran'i Mirtes fa izy, ny reniny ary ny zanany lahikely Miguel dia samy voatily avokoa ho mitondra ny SARS-CoV-2 (viriosin'ny COVID-19), saingy tsy dia atahorana ny soritraretin-dry zareo.
Efa iray tapitrisa ireo tranga coronavirus vaovao voarakitra ao Brezila hatramin'ny 22 Jona, ary maherin'ny 50.000 no efa maty. Izy no firenena faharoa voa mafy indrindra amin'ireo sokajy roa ireo, aorian'i Etazonia.
Mandritra izany, i Sari mpampiasa an'i Mirtes, vehivavy iray fotsy fihodirana monina amin'ny iray amin'ireo faritra tena mpanankarena ao Recife, dia avy aminà fianakaviana iray tena navitrika hatrizay teo amin'ny resaka pôlitika tao amin'ny fanjakàn'i Pernambuco. Sérgio Hacker, vadin'i Sari, no ben'ny tanàna ao Tamandaré, tanàna kely iray any amin'ny 100 km miala an'i Recife izay nambaran'i Mirtes fa efa matetika nitondran'ilay fianakaviana azy.
Taorian'ny fahafatesan'i Miguel, niboraka ny hoe i Mirtes dia nosoratana ho isan'ny mpiasam-panjakana tany Tamandaré. Araka ny rejisitra, Mirtes dia mitazona toerana mpifehy (cadre) ao amin'ny Lapan'ny Tanàna, mandray 1.517 BRL — ny karama farany ambany ao Brezila dia 1.045 BRL (282 sy 194 dolara amerikana ireo masombola voalaza etsy aloha ireo). Nilaza i Mirtes fa tsy mbola niasa velively tao amin'ny Lapan'ny Tanàna ary nolaviny fa tsy fantany akory hoe noraisina ho amin'ny toerana tahaka izany izy. Anaty fanadihadiana izao ilay raharaha.
TAKIANAY NY RARINY HO AN'I MIGUEL!
Ao Recife, nanao hetsika teo anoloan'ilay toeramponenana raitra fantatra amin'ny hoe Twin Tower, toerana nahafaty an'i Miguel ireo mpanao hetsipanoherana 20.000 ho an'ny ain'ny zazakely iray mainty fihodirana mahantra sy ny fangirifirian'ny reniny.
Niteraka hetsipanoherana tety anaty media sôsialy sy teny an-dalambe tao Recife ny fahafatesan'i Miguel. Ho an'ireo mpikatroka, tena vao mainka naha-maripamantarana izany bebe kokoa ilay tranobe nitrangan'ny loza : rakotra resabe ny fanorenana azy io satria mijoro anaty faritra arovana manantantara.
Ny 5 Jona, am-polony mahery ireo mpanao hetsipanoherana, nijoro niaraka tamin'ny fianakavian'i Miguel, no nanao diabe ho eny amin'ilay tranobe, toerana onenan'i Corte Real sy ny ankohonany. Nivalampatra teo amin'ny arabe ny olona ho fahatsiarovana ilay zaza namoy ny ainy.
“Aiza ho'ahy ny reniko”, ireo mpanao hetsipanoherana tao Recife androany, ho fahatsiarovana sy fitakiana ny rariny ho an'i Miguel kely, 5 taona.
Nandritra ireo hetsika tao Brezila hanoherana ny fanavakavahana taorian'ny nahafaty an'i George Floyd tany Etazonia sy ny hetsika Black Lives Matter dia notsarovana ihany koa ny fahafatesan'i Miguel.
Tranga iray hafa notsarovana tanatin'ireo hetsika koa ny an'i João Pedro, mainty fihodirana, 14 taona, maty novonoin'ny polisy tao an-tranony tany Rio de Janeiro tamin'ny 18 May.
Ny fikambanan'ireo zanakavavy sy zanakalahin'ireo mpiasa an-trano, niforona tamin'ny Martsa mba hitaky ny zon'ireo ray sy renin-dry zareo ho afaka hampihatra ny elanelana ara-tsosialy, dia namoaka taratasy fifandraisana iray mampahatsiahy fa izay nanjo an'i Miguel dia mety hanjo ihany koa ny iray amin'izy ireo:
Izay nanjo an'i Miguel, 5 taona, no manokatra midanadàna ny varavaran'ny TSY FITOVIANA, FANAVAKAVAHANA, SARANGA. Ny fandavana ny zo tsy ho afaka mampihatra ny elanelana sôsialy atrehan'ireo reny. Firy aminay no efa maty tany anatin'ireny trnobe ireny? Firy aminay no mbola tokony ho faty vao hisy zavatra hiova?